စပ်မိ စပ်ရာ (၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » စပ်မိ စပ်ရာ (၅)
စပ်မိ စပ်ရာ (၅)
Posted by nagargyi on May 12, 2011 in Critic | 19 comments
ကံဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်မြင်မိတာလေး ပြောပြချင်တယ်။ ဘာသာရေး အမြင်မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော့် အသိတစ်ယောက် တွေ့ဘူးတယ်။ သူကအရက် သိပ်ကြိုက်တယ်။ အရက်ကို အချိန်ရတိုင်း သောက်တယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးပေါ့။
တစ်နေ့မှာ နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးခန်းပြလိုက် ပြန်ကောင်းလိုက်နဲ့ (၄)(၅)ခါလည်းရှိရော သူ့ကို အသည်းပါရဂူနဲ့ ပြခိုင်းတယ်။ သူလည်း အသည်းပါရဂူနဲ့ အထူးကုဆေးခန်းမှာ ပြတာပေါ့။ သက်သာလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အသည်းဆရာဝန်က ဆေး(၁၀)ရက်သောက်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီ(၁၀)ရက်ပြည့်လို့မှ မသက်သာရင် ဆေးရုံတက်ရမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ (၅)ရက်လောက်နေတော့ မနေနိုင်တော့လို့ ဆေးရုံသွားပြတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက ဓါတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းတယ်။ ဓါတ်မှန်ကြည့်ပြီး ဆရာဝန်ကြီးက အဆုတ်ကမွနေပြီလို့ ပြောတယ်။
အဲဒီမှာ ပထမ အသည်းဆရာဝန်က အဆုတ်မှာဖြစ်နေတာ မသိဘဲ အသည်းဆေးတွေနဲ့ ကုနေတာကိုအံ့သြမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ နောက်ဆရာဝန်ကြီးက ကြိုးစား ကုတော့ပြန်ပြီး ကျန်းမာလာတယ်။ ဆေးတော့ သောက်နေရတုန်းဘဲ။ ဆရာဝန်ကြီးက အရမ်းတော်ပါတယ်။ လူနာရှင်တွေကို ဆရာဝန်ကြီးက နောက်ဆုံးစကား ပြောတယ်။ လူနာအခြေအနေက လုံးဝမကောင်းဘူး။ သေဖို့များတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေးမယ်လို့ ပြောပြီးကုတာ။
မြန်မာနိုင်ငံ အရမ်းတော်တဲ့ ဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်။ အသိတစ်ယောက်ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ သူ့ကိုယ်တွေ့။ မတော်တဆမှု့တစ်ခုကြောင့် ခြေကျင်းဝတ်ကနေ ပျက်ပြီးတန်းလန်း ဖြစ်နေတာကို အခြားဆရာဝန်တွေက ဖြတ်မှရမယ်ဆိုပြီး ဖြတ်ဖို့ပြင်တုန်း ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ရောက်လာပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲ မေးတယ်။ အခြေအနေမကောင်းလို့ ဖြတ်ဖို့ပြင်နေတာ ဆိုတော့ ဆရာဝန်ကြီးက ခြေဖနောင့်က အကြောတစ်ခုကိုကိုင်လိုက်တော့ ခြေချောင်းလေးတွေက လှုပ်နေတာတွေ့ရတော့ သူခွဲမယ်ဆိုပြီးခွဲတာ အခုအဲ့ဒီလူနာ ခြေထောက်နည်းနည်းဆာနေတာကလွှဲရင် အကောင်းနီးနီးဖြစ်နေပြီ။
အဓိကပြောချင်တာ ဆရာဝန်အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်က အသိအကြောင်းပါ။ သူကမသေချင်တော့လည်း အဆုတ်ရောဂါကို အသည်းဆေးတွေနဲ့ နှစ်နဲ့ချီအောင် မှားပေးပြီး
နောက်တစ်ယောက်က အသိရဲ့သားတစ်ယောက်။ အသက်က (၂၀)လောက်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်း။ လူကောင်ကလည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းဘဲ။
သူက ၀ိတ်လည်းမတယ်။ ကစ်ဘောင်ဆင်လည်းဆော့တယ်။ တစ်နေ့မနက်ကျတော့ ရင်ပတ်တွေနာတယ် လို့ပြောတယ်။ အိမ်ကလူတွေကလည်း အားကစားလုပ်လို့
ကိုယ်လက်နာတယ်ဘဲ ထင်တာပေါ့။ နောက်အရမ်းနာတယ်ဆိုလို့ ဆရာဝန်ခေါ်ပြတော့ ဆေးထိုးပေးပြီး ဆေးရုံအမြန်တင်ခိုင်းတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ မမှီတော့ဘူး။
ဆုံးသွားတယ်။ ရင်ခွဲကြည့်တော့ နှလုံးနရံတွေက ထူပြီးမာနေပြီတဲ့။ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆုံးတယ်လို့အတည်ပြုတယ်။
အဲဒီမှာတွေ့ရတာက မွေးရာပါနှလုံးရောဂါဆိုရင် အရင်တုန်းကတည်းက ရင်ပတ်အောင့်မှာဘဲ။ ဒါပေမယ့် သူကဒါနဲ့ သေရမယ့်သူဆိုတော့ ၀ိတ်မတာ ကစ်ဘောင်ဆင် ကစားတာတွေက နှလုံးကြောင့်နာတာကို ဖုံးထားလိုက်တယ်။
တစ်ချို့ စာစောင်တွေမှာလည်း တွေ့ဘူးမှာပါ။ ဘလက်ဖေါင်းပေါ် ကားတက်ပြီးတိုက်တာတုိ့။ နရံပြိုကျပြီး ပိတာတို့။ ရပ်ကွက်တွေမှာ ခဏခဏကြားရတတ်တဲ့ သူကအရင်
ဒီနေရာမသွားဘူး။ ဒီလိုမလုပ်ဘူး။ ဒီနေ့မှ ဒီနေရာသွားတာ ဒီလိုလုပ်တာ ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာတွေပါ။
နိဂုံးချုပ် အနေနဲ့ပြောရရင် ဒီလိုဖြစ်ရမယ် ဒီလိုကြုံရမယ်ဆိုရင် အဲဒီကိစ္စကိုရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ စနစ်တကျ အကွက်ချ စီမံထားသလိုပါဘဲ။
အဲဒါဟာ ကံရဲ့ ထူးခြားမှု့နဲ့ စနစ်တကျ စီမံတတ်မှု့လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်…. ကံစီမံရာကို သွားကြရတာပါ… ။
ဘ၀ကလည်း အမြဲတမ်း …. ကြက်တစ်ခုန် ကြွေတလှည့် … ဖြစ်နေပါတယ်….။ တနေ့ရွှေ … တနေ့ ငွေပေါ့ … ။
ကျမကတော့ ဘယ်အရာကို မဆို အရမ်းကြီး မမျှော်လင့်ထားဘူး…. ။ အဆိုးကောင်းဒွန်တွဲနေတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူထားပါတယ်… တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်ပြီးဖြစ်မလာလျှင် ကြေကွဲရတဲ့အခါ … စိတ်သက်သာရာရပါတယ်… ။
အကြောင်းတွေ ရှိလို့ ယခုဘ၀မှာ အကျိုးတရားတွေ ခံစားရတာပါ။
ဆရာဝန်တွေ တော်လှ တော်လှနဲ့ အနာနဲ့ ဆေး လွဲပြီး ကုလို့ သေတဲ့ လူနာ မနည်းပါဘူး။ မှတ်တမ်းပြုစုသူလည်း မရှိပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နားထဲကို ကြားကြားလာတဲ့ သတင်းအနေနဲ့သာ ရှိကြတာပါ။ စစ်တမ်းမရှိတဲ့ အတွက် အရေအတွက် မသိလို့ ဘာမှ မပြောပါ့လောက်ဘူးပေါ့။ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြီး ကျမ ဟိုဆေးမြီးတိုလေး စားထားပါတယ် ဆိုရင်တော့.. အေးးး ခင်ဗျားတို့ အသိတရား ခေါင်းပါးလွန်းပြီး တွေ့ကရာ ဆေးနဲ့ ဖြစ်သလို ယုံလွန်းလို့ ဒီလိုဖြစ်တာ.. လူနာကတော့ စုပ်လည်းစူး စားလည်းရူး ဘ၀ ရောက်နေပြီ.. ဆေးခန်းထဲမှာ ထွက်ပေါက် ပိတ်ထားတဲ့ ကြွက်ကလေးလိုပဲ.. မျက်နှာငယ်နဲ့ ဆရာကုမှ ကျမ ဘ၀ အသက်ရှင်ရမှာပါ ဆိုတဲ့ မျက်နှာနဲ့သာ ကြည့်ပြီး ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ပြောစကား နားထောင်ပါ့မယ် ဆေးကု ပေးပါရှင် ဆိုတဲ့ အသနားခံ ပုံစံနဲ့ ခေါင်းကလေး ငိုက်လို့ နေယုံမှ တပါး အခြားမရှိ။
နဂါးပြောသလို အဲဒါဟာ ကံရဲ့ ထူးခြားမှု့နဲ့ စနစ်တကျ စီမံတတ်မှု့လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကိုယ်ပြုတဲ့ကံပဲ့တင်သံကိုယ့်ထံပြန်လာမည်တဲ့။ ပါဏာတိပါတာကံဆိုတဲ့ သူ့အသက်သတ်တဲ့သူဟာချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ အသက်တိုတတ် ရောဂါထူပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာချက်ခြင်းအကျိုးမပေးပဲ မေ့လောက်ချိန်ကျမှအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။
အသည်းကုတဲ့ ဆရာဝန်တော့ ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေပါပြီ။
ခုတော့ ယူတော့လဲ သိန်းကို အနည်းဆုံး ဆယ်ဂဏန်းပဲ၊
သေသွားရင်တော့ sorry တဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်”လုပ်စား”တာလောက် တန်တဲ့နိုင်ငံ မရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။
စီပိုးရှိရင် ဆေးက သိန်း ၂၀၀ ဖိုး ထိုးရမယ် ဆိုလား..
မတတ်နိုင်လို့ မထိုးဘူး ပြောရင် လှည့်မကြည့်တော့ဘူး။
အဲဒီ ဆေး ထိုးတဲ့ အတွက် ရှင်မလား မေးတော့လည်း ရာနုန်းပြည့် အာမခံနိုင်ဘူး ၄၀ ၆၀ နဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။
စမ်းရင်းနဲ့ သေတဲ့ လူပေါင်းမနည်းဘူး။
စာရင်းမရှိ အင်းမရှိ.. လုပ်တာ လူမသိဘူး။
ပေါကဖော်တို့က ဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့တာ ဒန်နာနေတယ်နဲ့တူရဲ့…။ နာလည်း ရောက်နေတဲ့ကာလရထားကြီးပြန်ကွေ့ ကိုးတန်းလောက်က ပြန်နေ ….။လုပ်ချင်တယ်….ဆရာဝန်တို့ ကျောင်းဆရာတို့….။
ရောဂါဝေဒနာ မည့်သည့် အမျိုးအစား မဆို၊ မည်သည့်စိတ်ဆင်းရဲမှုမျိုးမဆို.၊ မည်သည့်ဒုက္ခသည်မျိုးမဆို…အခမဲ့ ကုသစောင့်ရှောက်ပေးမည့်. သစ္စာတရားကုထုံး ဖြင့် ကုသပေးနေသောနေရာရှိပါသည်.။ အောက်ပါလင့်လေးတွင် ဒေါင်းလုပ်ပြု လေ့လာဖတ်ရှုကြည်ကြပါကုန်။ http://www.mediafire.com/?c8id49t48yywkcp
လူနာက အရက်သောက်လို့..အသည်းတွေပျက်ရောက်လာလည်း…ဆရာဝန်က ကုတယ်..။
ဆေးရုံတွေမှာ.. အသည်းလူနာတွေများလာရင်… ပါမောက္ခဆရာဝန်တွေကို… ဆေးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့..စမ်သပ်မှုစရိတ်တွေကျခံပေးမှုတွေနဲ့.. သုတေသနအကြီးအကျယ်လုပ်လာတယ်..။
ဒီလိုနဲ့.. ပိုပိုစွမ်းအင်ထက်မြက်လာတဲ့… အသည်းရောဂါပျောက်ဆေးတွေ..။ အသည်းတခြမ်း..တခု..စသဖြင့်အသည်းအစားထိုးကုတာတွေပေါ်လာတာပေါ့..။
..ဒီလိုနှုန်းနဲ့သာဆေးသိပ္ပံက… တိုးတက်သွားရင်.. နောက်ဆိုအသည်းရောဂါသည်..လာခဲ့..။
အေအိုင်ဒီအက်စ်သမားလာခဲ့… ဆေးနဲ့ပျောက်အောင်ကုမယ်..။ ဖြစ်လာတော့တာပါ…။
ဒီလိုဖြစ်ရမယ် ဒီလိုကြုံရမယ်ဆိုရင် အဲဒီကိစ္စကိုရောက်အောင် ဆွဲခေါ်သွားတာမသွားတာတွေ.. စနစ်တကျ အကွက်ချ စီမံထားသလိုတွေ..မတွေးပဲ..ကံကိုမလွှဲချပဲ… ထာဝရဘုရားသခင်အလိုတော်ဆိုပြီး..ပစ်မထားပဲ..
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေက…လူသားတွေရဲ့ ထူးခြားမှု့နဲ့ စနစ်တကျ စီမံတတ်မှု့လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့.. ပိုလီယိုရောဂါကုနိုင်ခဲ့တယ်..။ သွေးလွန်တုတ်ကွေး..နိုင်နင်းလာတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ရာချီက…လူတွေ အများဆုံးအသက်ကိုချွေခဲ့တဲ့..ပုလိပ်ရောဂါ… မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ…။
အသည်းနဲ့အဆုတ်မှားကုတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးဆိုရင်လည်း..ဆိုင်ရာကိုတိုင်ပါ..။ တရားစွဲပါ..။ရေငုံနှုတ်ပိတ်… ကြိတ်မခံပါနဲ့..။
အရမ်းတေ်ာတဲ့ ဆရာဝန်တွေသိရင်လည်း.. လူတွေကိုပြောပြပါ..။ ချီးမြှောက်ပါ..။
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့.. အားကစားလုပ်နေပြီး မွေးရာပါနှလုံးရောဂါရှိမှန်းတောင်မသိတဲ့.. အဲဒီသူ့ဘေးက..မိသားစု.. အားကစားသင်တန်းဆရာ..မိတ်တွေတွေကို.. စောကတတက်ပါ…။ အပြစ်ဆိုပါ…။
ဘလက်ဖေါင်းပေါ် ကားတက်ပြီးတိုက်ရင်.. မြူနီစပယ်ကို တရားစွဲပါ..။တိုက်သူကို တရားစွဲပါ…။
နရံပြိုကျပြီး ပိတာတို့ဖြစ်ရင်… ဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက်..အင်ဂျင်နီယာတွေကို တိုင်ပါတောပါ.. ပြသနာရှာပါ..လို့ပါပဲ..။
nagargyi မိတ်ဆွေက အသည်းအထူးကုနဲ့ပြတဲ့ အတွက်၊ လူနာကိုယ်တိုင်ကလည်း အရက်သောက်တဲ့ လူနာ ဖြစ်လေတော့ အသည်းအထူးကုက ရောဂါရှာဖွေတဲ့ အချိန်မှာ အသည်းကိုပဲ first priority ထားပြီး ကုလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဆုတ်၊ နှလုံး နဲ့ ကျန်တာတွေကို second priority ထားလိုက်ပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောဂါနဲ့ဆေးလွဲသွားတာပါ။ ရောဂါတခုခုဖြစ်လို့ အထူးကုဆီသွားမယ်ဆို အထွေထွေ ရောဂါ အထူးကုဆီ အရင်သွားသင့်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စစ်ဆေးမှု၊ ကုသမှုကို ခံယူကြည့်ပြီးမှ လိုအပ်ရင် သက်ဆိုင်ရာ အထူးကု (အသည်း၊ နှလုံး၊ အဆုတ်၊ ဆီးချို၊ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော) စသဖြင့် ပြသသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ လူနာရှင်တွေက ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဒါကြောင့်ထင်တယ်ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆီ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်သွားပြလိုက်တာမျိုး ဟာလည်း ရောဂါရှာဖွေရေးမှာ လမ်းကြောင်းလွဲသွားတတ်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အထူးကုတွေဟာ သူတို့ဆီရောက်လာ တဲ့ အချိန်မှာ သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါရဲ့ လက္ခာအဖြစ် လက်ခံပြီး စတင်ကုတတ်ကြပါတယ်။ ကုကြည့်လို့ မဟုတ်ဘူးထင်မှသာ အခြားရောဂါ လက္ခဏာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြတာပါ။ ဒါကြောင့် အထူးကုနဲ့ ပြတော့မယ်ဆိုရင် အထွေထွေအထူးကုကို အရင်ပြသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။ တခါတလေ အထွေထွေက မကျွမ်းကျင်ရင်လဲ သူ့ဆီမှာ ကြာနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူဆီ မရောက်ပဲ ကုသမှုနောက်ကျတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အကိုတယောက် အသည်းပြည်တည်နာဖြစ်တုန်းက ရောဂါရှာဖွေပေးတဲ့ ဆရာဝန် ကတော့ တော်တော့်ကို တော်ပါတယ်။ သူက အထွေထွေနဲ့ ဆီးချို အထူးကုပါ။ သူကုသပုံကုသနည်းကို တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်။ သင်ကြားရေးဆေးရုံက ကထိကမို့လို့လားမသိဘူး လုနာရှင်ကို နားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးမှ ကုတာပါ။
ကျွန်တော့် အကိုဖြစ်တာက ဖျားတာပါ။ အဖျားက တက်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်ပြီး အန်တာမျိုးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးဆရာဝန်နဲ့ ကုနေရာကနေ နှစ်ပတ် သုံးပတ်လောက်ကြာတဲ့ အထိ အဖျားမပျောက်တဲ့ အပြင် အသားတွေ ၀ါလာတယ်လို့ထင်မိလို့ ဆရာ့ဆီရောက်သွားတာပါ။ ဆရာဆီရောက်တော့ ဆရာက ရောဂါရဲ့ လက္ခာကို ကြည့်ပြီး ဒါကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီး ရောဂါတွေကို ချရေးပြတာ ရိုးရိုးသာမန် အဖျားကနေ အဆိုးဆုံး HIV / AIDS, ကင်ဆာအထိကို ရောဂါအုပ်စုခွဲပြီး ရေးပြပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ခုမှ စ စစ်ဆေးကြည့်ရတာမို့ ရောဂါကို အဆိုးဆုံးကနေ စ မစဉ်းစားဘူး၊ သာမန်ဖျားတဲ့ အဆင့်လဲ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါကို စဉ်းစားပြပြီး ဆေးပေးပါတယ်။ အသည်းကြောင့်လို့တော့ သူက ထင်ထားပါပြီ။ အသည်းဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကိုပဲ သေချာအောင်အဖြေထုတ်ရတော့မှာပါ။ ultra sound ရိုက်ခိုင်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့မှ အသည်းမှာ ပြည်တည်နာဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ ultra sound result ကို နေ့ချင်း ပဲ ပြန်ပြလိုက်တာမို့ ဆရာက သူပေးထားတဲ့ ဆေးတွေမသောက်ပဲ ဆေးရုံတက်ဖို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီလို ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ရတာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ တော်တော်ကို ကုသိုလ်ကောင်းပါတယ်။
မမေ့ဆီးချိုကိုလဲ ဆရာပဲ ကုပေးတာပါ။ ခုလိုပဲ ဆီးချိုရောဂါအကြောင်း ကို အသေအချာရှင်းပြပြီး ကုတာပါ။ ဆီးချိုရောဂါထက် နောက်ဆက်တွဲ ကပ်ပါလာမယ့် နှလုံး၊ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို အသေအချာ ရှင်းပြပြီး ဆီးချိုဖြစ်တာကို နှလုံး၊ သွေးတိုး၊ ကျောက်ကပ် ဆေးတွေ ထည့်ပေးရခြင်း အကြောင်းရင်းကို လူနာရှင် နားလည်အောင် ရှင်းပြထားပါတယ်။ လူနာရှင် အနေနဲ့ ဆီးချိုကို အဓိကထား ကုနေချိန်မှာ ကျန်တဲ့ ရောဂါတွေက ဒုက္ခပေးသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ သွေးချို တိုင်းပုံတိုင်းနည်းနဲ့ သူပေးထားတဲ့ ဆေးတွေရဲ့ upper limit ကိုလဲ လူနာရှင်ကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာ့ရဲ့ ကုသပုံကို အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်။ လူနာကို အချိန်ဆွဲပြီး ကုတာမျိုး မလုပ်လို့ပါ။
researcher ရေ အဲဒီ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ အမည်လေးများ သိလို့ရမလား ခင်ဗျာ
ရောဂါ တခု ဖြစ်ရင် အရင်ဆုံး ရောဂါ ရှာဖွေရေး ဆရာဝန်ဆီ သွားပြသင့်ပါတယ်။ ရောဂါ ရှာဖွေရေး ညွန်ကြားတဲ့ အတိုင်း ဆက်လက်ကုသသင့်ပါတယ်။
အသက် ၉၀ ကျော် အဘိုး တယောက် ကတော့ ရောဂါရှာဖွေရေး ဆရာဝန်တယောက်မှာ ကုပါတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ စိတ်ရှည်ချက်ကတော့ ဆီးချိုရှိတယ် ဆိုရင် ဆီးချိုဆေး ပေးထားတယ်။ ချောင်းဆိုးနေတယ် ဆိုရင် ချောင်းဆိုးဆေး ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ အိပ်မပျော်ဘူး ပြောတော့ အိပ်ဆေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ မကောင်းတာက.. လူနာ လာတယ်… စာအုပ်ကြည့်တယ်။ ရောဂါအတွက် ပေးထားတဲ့ ဆေးတွေ ရဲ့ အောက်မှာ ဆက်ရေးပြီး ဆက်တိုက်ရေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ပေမဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး ဆက်သောက်နေရပါတယ် ဆေးသောက်မရပ်ခိုင်းတဲ့ အတွက်.. ဒီလိုနဲ့ ညအိပ်မပျော်တော့ဘူး ပြောတော့.. ပထမ ဆေးပေးတဲ့ အတိုင်း အကုန်ကူးချ အောက်က အိပ်ဆေး ထပ်ပေးတယ်။ နောက်တပတ်သွားတော့ မောကျပ်ကျပ် ဖြစ်တယ် ဆိုတော့.. နှလုံးဆေး ပေးပါတယ်။ အမှန်တော့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကို ကာလာ ရှည်ကြာ သောက်မိတဲ့ အတွက် ည အိပ်မပျော်ပါဘူး အိပ်မပျော်တာကို ပျော်အောင် ဆေးပေးပြီး အိပ်ခိုင်းရာကနေ တဆင့်တိုးလို့.. အသက်ရှုမတဲ့ အထိ ဖြစ်ပြီး လူက ပိန်ချုံးသွားပါတယ်။ နောက်တော့ မဟန်ဘူး ဆရာဝန် ပြောင်းပြဖို့တိုက်တွန်းပြီး ရောဂါ ရှာဖွေရေး ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်မေညွန့်နဲ့ ပြောင်းပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတော့ ဘာမှဆေးမှ မသောက်ရတော့ပါဘူး။ ဆီးချို အတွက် ဆေးလေး ပုံမှန် ထိန်းသောက်ယုံပါပဲ။ အဲဒီ အဘိုးလည်း ကျန်းမာလာပြီး စိတ်လည်း တော်တော် ချမ်းသာ သွားပါတယ် အရင် ဆရာဝန်နဲ့ကုတာ ဆေးသောက်ချိန်ဆို သောက်တဲ့ ဆေးက လက်တခုပ်နိးပါး ရှိပါတယ် တခါရေလိုက်မိတာ ၁၆လုံး ရှိတယ်။
ဆရာဝန် ပြောင်းပြ လိုက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ နောက်တခါ အဲဒီ အဘိုးပါပဲ သွေးတွေ တအားတက်တာ မသိလိုက်ပါဘူး ခေါင်းတွေ ကိုက်တယ် မခံနိုင်အောင် ကိုက်တယ် ဆိုပြီး ငြီးနေလို့.. ရန်ကုန်ကို ခေါ်လာပြီး အာရှတော်ဝင်ကို ဆေးရုံတင်ပါတယ်။ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်တွေက စမ်းသပ်ကြည့်တော ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ပြန်လွတ်ပါတယ်။ လူနာကတော့ ခံနေရတာ အညီးညီးတညူညူပါပဲ.. လူနာရှင်တယောက်က ဒီအဘိုးက ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်မေညွန့် လူနာ လို့ ပြောလိုက်တော့ ခဏနေအုန်းဆိုပြီး ဆရာမကြီးဆီ ဖုန်းဆက်ပေးတယ်။ အခြေအနေ ကိုပြောတော့.. ခေါင်းထဲက သွေးကြောမှာ တခုခု ဖြစ်ပြီ ဟု ကောက်ချက်ချပြီး ဆေးရုံတင်ခိုင်းပြီး ၈နာရီ ခြား တခါ ဆေးထိုးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနဲ့ ပြန်ကောင်းသွားပြီး ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းရပါတယ်။ ဆရာဝန်မကြီးကပြောတယ် ရှင် ဒီထက်နောက်ကျရင် ဆေး မမှီနိုင်ပါဘူးတဲ့။ သူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်လို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။
ဆရာက ဒေါက်တာဦးကိုကိုပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ခွဲလာက် ကျွန်တော်တို့ ကုနေတဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ ဆရာက မြောက်ဥက္ကလာ သင်ကြားရေးဆေးရုံက ကထိကပါ။ ( M. R.C.P ) တစ်ယောက်ပါ။ ဆူးလေ ဧမာနွေလ ဘုရားကျောင်းနားက သီတာဦး ဆေးခန်း ရယ်၊ ပြည်လမ်းက သုခကမ္ဘာရယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာက ဆေးရုံကြီးနားက ယုဇန ဆေးခန်းရယ်၊ မြောက်ဒဂုံ မဟာမြိုင်ထဲက ဒဂုံဆေးခန်းရယ်မှာ ထိုင်ပါတယ်။ လူနာကို အပတ်စဉ်ချိန်းပြီး ဆွဲကုတာမျိုး မလုပ်တာကို သဘောကျပါတယ်။ သိပ်ကို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ ဂရုစိုက်ကုသမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်ခံချင်တဲ့ သူတွေကတော့ ဆရာဝန်က သိပ် take care မလုပ်ဘူးလို့ ထင်ချင်ထင်ပါ လိမ့်မယ်။ ရောဂါရဲ့ အတိမ်အနက်ကို သိရှိပြီး ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ ကုသမှုခံယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဆရာကကောင်းပါတယ်။
သူတို့လို ဆရာဝန်တွေရှိလို့ လူတွေမြန်မြန်မသေဘဲ အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရတာပါ။
ရှော်တဲ့ဆရာဝန်တွေလဲရှိတယ် ဖျားလို့ဆေးခန်းသွားပြတာ မတ္တရာရောက်ဘူးသလား မေးတာကိုရောက်ဘူးတယ်ပြောလိုက်မိတာနဲ့ငှက်ဖျားဆေးတွေပေးတာ
လူကတော့ မသေပါဘူးဆံပင်ကတော့ ရှေ့တခြမ်းလုံးပါတော်မူသွားတယ်။
အဲတော့ ကိုယ်နေမကောင်းလုိ့ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားမယ်ဆိုရင် အသားငါးဝယ်တဲ့အခါ လတ်မှ လတ်ရဲ့လားလို့ စမ်းပြီးမှာ ၀ယ်သလို ဆရာဝန်လဲ အနံ့ကောင်းမကောင်း စုံစမ်းပြီးမှသွားပေါ့။
ဆရာဝန်လူတန်းစား တစ်ခုလုံးမကောင်းဘူးဆိုရင် မှားပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု့တော့ ရှိရပါမယ်။
ကံ ဆိုတာလည်း အလုပ်ပါပဲ။ ရောဂါသစ်တစ်ခုတွေ့တယ်။ သုသေတနလုပ်တယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်တယ်။ ကုသဆေး ထုတ်တယ်။ ဒါတွေဟာလည်း အလုပ်တွေပါပဲ။
ဟိုတုန်းက ကျောက်ရောဂါကြောင့် လူတွေ အသေအပျောက် အတော်များပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ကာကွယ်ဆေး ဖေါ်ထုတ်နိုင်လို့ အသေအပျောက် မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါတွေဟာ တစ်ခြားဖက်ကနေ မြင်ကြည့်ရင် အခုခေတ် လူတွေဟာ အဲဒီရောဂါနဲ့ သေရမယ့်ကံ မပါလို့ပဲလို့ မြင်လို့ရပါတယ်။
(ဘလက်ဖေါင်းပေါ် ကားတက်ပြီးတိုက်ရင်.. မြူနီစပယ်ကို တရားစွဲပါ..။တိုက်သူကို တရားစွဲပါ…။
နရံပြိုကျပြီး ပိတာတို့ဖြစ်ရင်… ဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက်..အင်ဂျင်နီယာတွေကို တိုင်ပါတောပါ.. ပြသနာရှာပါ..လို့ပါပဲ..။)
သဂျီးရေ- ရောမရောက်ရင် ရောမလို ကျင့်ရတယ် ဆိုသလိုပါပဲ။ သဂျီးကယူအက်စ်ရောက်နေတော့ အဲဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လုပ်လို့ရတယ်။ ကျမတို့မှာတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိ၊ လုပ်လို့လည်းမရတော့ ကိုယ်လုပ်လို့ရတဲ့ တရားနဲ့ဖြေတဲ့နည်းကိုပဲ အားကိုးနေရပါတယ်။ သဂျီးရဲ့ရွာထဲမှာပဲ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိလို့ ရွာသူရွာသားတွေ ရွာထဲမှာ ပျော်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းတာပါ။)
သူကြီးကနိုင်ငံခြားမှာနေတာကြာလို့တရားစွဲဆိုတဲ့စကားကို လွယ်လွယ်ပြောနိုင်တာ၊ မြန်မာပြည်မှာအနေကြာလာတဲ့သူတွေက မှန်မှန်မှားမှား တရားစွဲရမှာကို ကျားမြီးဆွဲရမှာထက်ကြောက်ကြတယ်။ သူကြီးရေ တရားစွဲတိုင်းအမှန်တရား ပေါ်လာမယ်မထင်နဲ့၊ အဆင်မသင့်ရင်အမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ ကိုယ်တောင်ပြန်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်၊
မြန်မာပြည်ထက် အများကြီး(အများကြီး) ပိုခက်..ပိုကုန်ကျပါတယ်..။
မတရားတာကို.. ငုံ့ခံတဲ့စိတ်က… ကိုယ်တင်မက..ကိုယ့်နေတဲ့လူ့ဘောင်..အသိုင်းအ၀ိုင်း..နိုင်ငံကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်..။
အမှားပေါ်တာ..အမှန်မဖြစ်တာ.. တရားရှုံးတာ.. တရားနိုင်တာ.. တရားရေးအပိုင်း…
မတရားတာကို.. တရားရေးနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့..စိတ်ဓါတ် အခြေခံကျကျမွေးမြူထားကြဖို့လိုပါတယ်.။
တရားစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် ယူအက်စ်မှာက ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဟိုမှာက ကိုယ်တစ်ကယ်
နစ်နာတာမှန်ရင် ကိုယ့်ကိုကူညီပြီး တရားစွဲပေးမယ့် ရှေ့နေတွေ ရှိပါတယ်။ လျော်ကြေးရမှ သူ့တို့ကို အချိုးကျ ပေးရတယ်။
ဒီမှာက ကိုယ်မှန်နေရင်လည်း ရဲစခန်းတိုင်တာ၊ တရားစွဲတာက အစ ငွေမရှိပဲ လုပ်၍မရပါဘူး။ အရင်ဆုံး
စာရေးကစပြီး လ္ဘက်ရည်ဖိုး လိုပါတယ်။